कोरोना महामारीले गुमनाम पारेका दृष्टिविहीन गायक रामकुमार
धनगढी | पुस १७, २०७८
कला र गलाले संगीत जगतमा आफ्नो बेग्लै पहिचान बनाउन सफल गायक हुन् कैलालीका रामकुमार कठरिया (३४) ।
दृष्टिविहीन छन् उनी तर आफ्नो जादुमय स्वर र प्रस्तुति शैलीले जो कोहीलाई मोहित बनाउँछन् । थारु, नेपाली, कठरिया भाषाको सांगीतिक क्षेत्रमा उनी निकै अब्बल दर्जाका गायक मानिन्छन् तर पछिल्लो २ वर्षयता भने उनी गुमनाम छन् ।
कैलालीको कैलारी गाउँपालिका–२ उत्तर मंझराका उनी विपन्न परिवारबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् । पुर्ख्यौली सम्पत्तिको नाममा ५ कठ्ठा जमिन छ । उनको जीविकोपार्जनको एउटै माध्यम हो गला । ठाउँका ठाउँ सांगीतिक खुराक पस्कन सक्ने क्षमताले उनी संगीत प्रेमीको ढुकढुकी बन्न सफल भएका छन् ।
तर विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना महामारीले उनको गला र कलाको घाँटी रेटिएको सुनाउँछन् । उनी भन्छन्, ‘महामारीले सबै क्षेत्र प्रभावित छ । दृष्टिविहीन भएका कारणले मेरो लागि त झनै यो समय फलामको चिउरा चपाउनुसरह भएको छ । मेरो परिवारको आयस्रोतको माध्यम नै मेरो गला हो । यो महामारीले मेरो गला नै सुकेझैं लाग्छ ।’
कैद भएका सिर्जनाहरू उडानको पर्खाइमा
महामारीअघि उनी आफ्नै कला र गलाको कमाइले २ कठ्ठा जमिन किन्न र घर बनाउन सफल भए । उनको सांगीतिक उडानले गति लिएको थियो ।
उनी थप्छन्, ‘कसैले यस्तो सोचेको थियो र ? कल्पना समेत गरेको थिइनँ । कला क्षेत्रमा लगानी गर्ने बेलामा विश्व नै कोरोना कहरले प्रभावित भयो । म कसरी अछुतो रहन सकुला ? हाल मेरा सिर्जनाहरू कैद छन् । बाहिर आउन खोजिरहेका छन् । कति बेला अनुकूल वातावरण पाउँलान् र उडान भर्लान् ।’
उनले २०६३ सालदेखि आफ्नो गायन यात्रा शुरू गरेका हुन् । उनमा सेन्टिमेल्टल, रोमान्टिक, सांस्कृतिक, पप, कमेडी भावशैलीको गीत रचना गर्न, स्वर दिन तथा पूर्ण संगीत सिर्जना गर्न सक्ने अद्भूत क्षमता र कला छ ।
हालसम्म आफूलाई मन पर्ने थारु भाषाको रोमान्टिक सेन्टिमेटल गीत ‘मन काहे टोहार बिना रहठ मोर उदास’ रहेको उनी बताउँछन् ।
उनले हालसम्म आफ्नै शब्द, संगीत र स्वरमा सजिएका ३०० बढी गीतहरू बजारमा ल्याएका छन्, जसले सांगीतिक क्षेत्र तताइरहेका छन् । उनका ६० बढी गीत संयुक्त स्वरमा सजिएका छन् । ती गीतहरू तराई–मधेशका गल्लीहरूमा सदाबहार गुञ्जयमान छन् ।
उनले शुरूमा कठरिया भाषाको गीति एल्बम ‘टुम्हर विना’ ल्याएका थिए । त्यसपछि डेढ दर्जनभन्दा बढी गीति एल्बम लगातार बजारमा ल्याए ।
‘जैसे बगिया सुहावन लागे’, ‘टीकापुर बजारमा देख्नु टुहिन’, ‘तोहार ओठ लागे लसाहा’, ‘लिख डहनु हाय राम सन्देश टुम्मर नामटी’, ‘घोराघोडी मन्दिरम हाँ टु मै भेट करबी’, ‘अकाशके पानी जसिन’, ‘टुहिनसे सटकटमे लभ होगिल’, ‘हाइ मोर डार्लिग’, ‘आँखीम् चस्मा, लग्ठो करिस्मा’, ‘मोर सानु’, ‘टुहिनसे प्यार होगिल पहिल मुलाकाटमे’ जस्ता गीत युवायुवती, वृद्धवृद्धा लगायतको जनजिब्रोमा झुण्डिन सफल छन् ।
यति मात्रै होइन, उनको कमेडी भावको ‘सुग्घुर जन्नी छाँट के ना लेहो भैयौ, सुग्घर जन्निक् दिल बरे खोट रे’, ‘मोर दुई ठो जनेवन बटै, दुनुक नाउ रामप्यारी’ गीतले समाजमा व्याप्त विकृति तथा प्रवृतिविरुद्ध व्यंग्य वाण प्रहार गर्छन् ।
उनको ‘दिल डैडेम मंग्बो तो’ नयाँ गीत बजारमा आउने तयारीमा छ ।
‘मौलिक भाषामा हिन्दीकरण हुँदा दुःख लाग्छ’
पुराना गीत, कला, संस्कृति र सर्जकहरू आझेलमा पर्दै गएको भन्दै उनी चिन्ता व्यक्त गर्छन् । सस्तो लोकप्रियताका लागि केही कलाकार तथा सर्जकहरूले मौलिक भाषामा हिन्दी मिसाएर विकृत पार्दैआएकोमा उनको दुःखेसो छ । मौलिक भाषा र संस्कृति संरक्षणतर्फ सबैको ध्यान जान आवश्यक रहेको उनको जोड छ ।
उनी भन्छन्, ‘पुराना गीतहरू ओझेलमा पर्दै गएका छन् । त्यसैले दूध होइन, दूध दिने गाईलाई जोगाउन सकिएन भने संस्कृति लोप हुँदै जान्छ । कलाकार जोगाए मात्रै कला जोगिन्छ ।’
घरमा पत्नी, छोरासहित उनको ३ जनाको परिवार छ । उनको आयस्रोतको दरिलो अर्को माध्यम मेला, महोत्सवमा आयोजना हुने सांगीतिक स्टेज कार्यक्रम पनि हो तर त्यही स्टेज कार्यक्रममा प्रस्तुति गरेबापत पाउनुपर्ने पारिश्रमिक नपाउँदा साह्रै पीडा बोध हुने उनको भनाइ छ ।
‘अधिकांश ठाउँमा मलाई प्रयोग मात्रै गरियो । पारिश्रमिकमा पनि बार्गेनिङ हुन्छ । कुरा गर्‍यो कुराकै दुःख भन्छन्,’ उनले भने ।
अतिविपन्न परिवारमा जन्मिएका रामकुमारको आँखामा जन्मजात जलबिन्दुको समस्या देखियो । उचित उपचार र खानपानमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने डाक्टरको सुझाव थियो तर २ छाक खानाकै लागि संघर्ष गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । आँखाको उचित उपचारभन्दा उनी कलिलै उमेरमा कामको खोजीमा २०५८ सालताका भारतको उत्तराखण्ड पुगे । भारतको मेरठ, बरेली, सिमला, हरियाणा लगायत शहरमा कडा परिश्रम गर्नुपरेको उनी आफ्नो विगत सुनाउँछन् ।
कडा परिश्रमकै कारण भारतमै रहेको बेला २०६२ सालमा उनले दुवै आँखाको ज्योति गुमाए । अनि जीविकोपार्जनको माध्यम सांगीतिक क्षेत्र रोजे उनले ।
मदनकृष्णको स्वरमा ‘एउटा सपना छ’को लिजेन्ड्री भर्सन, जन्मदिन पारेर सार्वजनिक [भिडियो]
वरिष्ठ हास्य कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठको स्वर एवं अभिनयमा ‘एउटा सपना छ’ बोलको गीत सार्वजनिक गरिएको छ । मंगलबार मदनकृष्णको जन्मदिनको अवसर पारेर उनको स्वर एवं अभिनय रहेको ‘एउटा सपना छ&...
‘सरुँ सरुँ’ भन्दै चियाबारीमा मायाको कुरा गर्दै निराजन र मिरुना
निराजन प्रधान र मिरुना मगरले पहिलोपल्ट जोडी बाँधेको म्युजिक भिडियो ‘सरुँ सरुँ लाग्यो’ सार्वजनिक भएको छ । राजेश पुमा राईको निर्देशन रहेको गीतमा चियाबारीका सुन्दर दृश्यमा मायाको कुरा गरेका छन् ...
डिपी र ममताको स्वरमा ‘मायाको मौसम’ [भिडियोसहित]
गीतकार डिपी खनाल र गायिका ममता गुरुङको स्वरमा ‘मायाको मौसम’ बोलको प्रेमगीत सार्वजनिक गरिएको छ । भिडियोमा देखिएका मोडल सुधिर श्रेष्ठको जन्मदिन पारेर बुधवार गीत सार्वजनिक गरिएको हो ।&nb...
गीतकार वीरेन्द्र पाठकको एकल रचना एवं प्राज्ञ सुनिल मास्केको एकल सङ्गीतमा तयार भएको गीति सङ्ग्रह ‘खुसीको खुराक’ सार्वजनिक भएको छ । ‘खुसीको खुराक’मा मन पर्ने मायालाई, खुसीको खुराक, क...
मुरलीधरले पहिलोपटक खेले म्युजिक भिडियो
‘उडायो सपना सबै हुरीले...’गीत नसुन्ने सायदै कोही नेपाली होलान् । यस गीतका गीतकार तथा गायकबारे जानकारी नहुने संगीतप्रेमी पनि कमै होलान् । मुरलीधर मिझारका यो मात्र होइन्, ‘चिसो चिसो सि...
रेनु दाहालको चुनावी गीत सार्वजनिक
महानगरपालिकाकी मेयर रेनु दाहालको चुनावी प्रचार गीत सार्वजनिक भएको छ । सत्तागठबन्धनको मंगलबार बसेको बैठकबाट भरतपुरको मेयर माओवादी केन्द्रलाई दिने सहमति भएसँगै दाहालको चुनावी प्रचार गीत सार्वजनिक भएको हो । म...
पूर्वपदाधिकारीको सुविधा र सुरक्षासम्बन्धी कानूनको मस्यौदाका लागि कार्यदल